९३ वर्षीया महिलाद्वारा अस्पताललाई १० लाख सहयोग |
९३ वर्षीया महिलाद्वारा अस्पताललाई १० लाख सहयोग
प्रकाशित मिति :2015-05-14 11:41:32
कास्की, वैशाख ३० । समाजसेवी बालकुमारी कुँवरले पोखराको फिस्टेल अस्पतालमा अक्षयकोष स्थापनाका लागि १० लाख रुपैया सहयोग गर्नुभएको छ ।पोखरा बाराही चोककी ९३ वर्षीया बाल कुमारी कुँवरले बाल कुमारी कुँवर (गीता) एवं धन कुँवर अक्षयकोष स्थापना गर्नु भएको हो ।
कुँवरले उक्त रकम अस्पतालका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. प्रदिप घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । न्यून आय भएका विरामीलाई सहयोग गर्न अक्षयकोष स्थापना गरीएको कुँवर परिवारले जनाएको छ । अक्षयकोषबाट प्राप्त हुने व्याजमार्फत विरामीलाई निःशुल्क औषधी वितरण गरिने छ ।
अस्पतालले वार्षिक रुपमा आयोजना गर्ने स्वास्थ्य शिविरमा आएका विरामीलाई निःशुल्क औषधी वितरण गरिने अध्यक्ष डा. घिमिरेले बताउनु भयो । साथै उहाँले बालकुमारीको नाममा स्थापना भएको कोषको रकम गरीबको हितकालागि मात्र खर्च गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
वरिष्ठ डाक्टर वसन्त ताम्राकारले गरिव तथा असहाय व्यक्तिलाई लक्षित गरी अक्षयकोष स्थापना गरिनु निकै सह्रानिय भएको बताउनुभयो । बालकुमारीकाका कान्छा छोरा हिक्मत कुँवरले बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने आमाको चाहानालाई पुरा गर्न आफूहरुले यो अक्षयकोष स्थापना गरिएको बताउनु भयो ।